Geofumadas: 30 sano ah oo ah AutoCAD iyo Microstation - Geofumadas
Egeomates: 30 sano AutoCAD iyo Microstation
Abriil, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Ka dib ku dhawaad ​​30 sano oo ka mid ah laba barnaamij, kaas oo dhab ahaan u muuqataa in ay mid ka mid ah dhowr ah kuwaas oo ay u noolaadaan taariikhda evolutionary dheer, waxaan waqti u qaatay inuu ka fiirsan arinta si ay u muujiyaan qaar ka mid ah Dhacdooyinka ugu muhiimsan ee geeddi-socodka, aan noo ogolow inaan xasuusto wixii dhacay iyo waxa aan u qaadan karno muddada gaaban.
Guud ahaan, labada barnaamijba waxay ku jiraan waqti isku mid ah laakiin leh istaraatijiyado kala duwan oo suuqgeyn iyo horumarineed. Labada bilaabay barnaamijyo dhameeya design, markaas ayaa ku khamaarayaan in khadadka taagan gobolka, AutoDesk noqday caan ah oo ku filan si ay ula wareegaan inta badan suuqa sida Architecture gudbiyo iyo Engineering, ku khamaarayaan malaayiin badan oo haatan dunida multimedia iyo Warshadaha . Inkastoo Bentley uu ka tagay qayb yar, iyada oo ujeedadeedu ay tahay dhinaca shirkadaha waaweyn ee injineernimada, dhismaha iyo warshadaha warshadaha. Waayo, in ka mid ah qaar ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee suuqa oo ay barnaamijyada sida CATIA, Pro / IGENEER iyo UniGraphics leeyihiin saami sidaas u weyn inkastoo ay yar arki karo in deegaankeena.
Sannad AutoCAD Microstation
Intii lagu jiray sanado 4 AutoCAD waxay qaadatay faa'iido weyn iyada oo loo jihaysanayo kombiyuutarada shakhsi ahaaneed. Dhinaca kooxda Bentley, waxba ma jiraan, marka laga reebo uu hore u ahaa Intergraph oo leh tiknoolajiyo sare si ay ugu shaqeeyaan Meelaha waaweyn ama kombiyuutarada yaryar ee ku xiran gundhigga shaxanka.
1979 waxaa la sameeyay qaabka IGES.
1980 AutoCAD Version 1.0
markaas barnaamijka MicroCAD ka dhashay, falgalaan (1978) la odhan jiray, ee ay soo Mike halxidhkii ee SPL ahaa kii ugu horeeyay ee ay maamulaan ee caadiga ah ee computer ugu baaqay Marinchimp 9900 (dadka kale oo kaliya sameeyey looxyada weyn ama microcomputers) ordaya. AutoDesk 16 Cofounders ay iibsadaan iyo qori ee C iyo luqadda PL / 1 loogu tala galay in kor loogu qaado software CAD ah PC in kharash ku dhawaad ​​US $ 1,000.
Waxay ahayd mid ka mid ah barnaamijyada ugu horreeya CAD-da ee ku shaqeeya kombuyuutarka.
Waxa uu ka badbaaday tobankii sano ee la soo dhaafay CATIA, taas oo ah in 1977 iyo 1971 Unigraphics laga bilaabo taariikhda hadhay sida madaxda design gaarka ah si farsamaysan. Intergraph Edit Editor
Inkastoo Intergraph uu ahaa shirkad horumarineed tiknoolajiyad sare laga bilaabo 1969Xataa nidaamka ahaa qaabab editor jaban waayo Interactive Graphics Design System (IGDS) minicomputers Super 1980 VAX.Antes nidaamka CAD ah lacag gaadhaysa $ 125,000, 512 KB la xasuusta iyo ka yar disk 300 MB.
Iyadoo ay soo ifbaxeen PCs, IBM oo leh 64k of RAM kharashka US $ 5,000.
1981 AutoCAD Version 1.2
Waddo dheeraad ah ayaa lagu darey cabirka, iyada oo lacag dheeraad ah la siinayo.
1982 AutoCAD Version 1.3
AutoCAD Sannadkan waxaa lagu soo bandhigay in COMDEX sida barnaamijkii ugu horreeyay CAD in waddaa on PC ah, sidaas darteed waxaa la odhan jiray AutoCAD 80 iyo AutoCAD 86, tilmaamayaa in PC oo ku baaqay in 8086, inkasta oo waxaa laga heli karaa for sale ilaa 1983.El menu wuxuu taageeraa wax ka badan 40 items, curinta ayaa u muuqda markii ugu horreysay, xuduudaha aasaasiga ah ayaa la abuuraa si ay u daabacaan jadwalka. Tirooyinka ayaa lagu qiyaasaa midabada.
Sannadkan, CADPlan wuxuu dhashay oo dabadeedna loo yaqaan CADVANCE. CATIA waxaan sidoo kale la bilaabay sanadkan.
II Saacadaha DOS AutoCAD ee sanadaha 4 ee soo socda waxay abuureysaa istiraatiijiyado caalami ah, waxay gaari doonaan dadka isticmaala 50,000 waxayna u yimaadeen inay noqdaan kuwa ugu fiican barnaamijka CAD.
Dhanka kale, Microstation ma jirin sida noocaas ah, laakiin waxay ahayd Pseudostation oo noqday tifaftiraha qaabka IGDS ee kombiyuutarka iyada oo aan loo baahneyn isticmaalka barnaamijyada Intergraph.
1983 AutoCAD Version 1.4
Ilaa sanadkani noocyada AutoCAD 1.2, 1.3 iyo 1.4
Nooca koowaad ee AutoCAD ee luqadda Jarmalka. Waxay ku kacday $ 1,400, tartanku wuxuu ahaa VersaCAD oo ka jiray 1980.
Tilmaamo badan oo lagu amrayo sida zoom, arc, array. Dawladaha ayaa soo baxaya qashin qubka. Qaybaha cusub iyo amarrada ayaa u muuqda sida xajmiga, cutubyada, dabaqyada, jebinta, laalaabka. Sanadkan Heerka Soodhexe ee Xogta Macluumaadka Qalabka STEP ayaa u muuqda.
1984 AutoCAD Version 2.0
Sannadkan waxa uu arkayaa Xarunta Tababarka Bilaashka ah ee AutoDesk.
Amarada cusub: muraayada, osnap, magaciisa lagu magacaaboiyo awoodda isometric.Sannadkan, CATIA wuxuu ahaa hogaamiye injineernimo. PseudoStation
Emulator waxaa loo sameeyay qaabka uu noqon karo nidaam kaliya oo akhriya qaababka IGDS ee Kumbuyuutarada Shakhsiyeed adigoon isticmaalin software-ka Intergraph. Sannadkan Keith Bentley wuxuu helay Bentley Systems.
1985 AutoCAD Version 2.1
AutoDesk waxay kor u qaadeysaa CADCamp-ka koowaad, iibinta sanadkaan wuxuu gaarayaa US $ 27 million US $ 3 Muuqaalka koowaad ee XNUMXD.
Amarada cusub: foori.
Sannadkan waxa soo gala MiniCAD, oo ah barnaamij dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah.
1986 AutoCAD Version 2.5
Noocani wuxuu sameeyey mid aad u caan ah, amarro badan oo editing ah ayaa u muuqda: Qaybi, Shidaan, Kordhin, Cabbiraad, Dhibaato, Jajabiyaan, Iskuduwaha, Weyn, Dhar.
AutoLisp waxay la imaaneysaa hanti badan. AutoDesk waxay ku guuleeystaa liisanka 50,000 ee lagu iibiyo adduunka. Laga bilaabo sanadkaan, iyo sanadka 10 AutoCAD wuxuu ku guuleystaa barnaamijka ugu fiican ee barnaamijka "PC World Magazine".
Sannadkan adduunka Mac Macsameynaya Deneba in MacLightning noqon lahaa Canvas. Microstation 1.0
Tani waa qaybta ugu horeysa ee Microstation oo ka shaqeyn karta Kumbuyuutarada Shakhsiyeed, hadda waxay ku habaysay qaabka IGDS, waxay ahaayeen waqtiyo ka mid ah IBM 80286 PC.
III Ka-hortagga xabbado 32
Waqtigaan, AutoDesk waxay gaarsiisaa macaamiisha isticmaala iibsashada GenericCADD. Waxa kale oo uu iibsanayaa SoftDesk iyo Drafix-ka waxa uu bilaabay inuu soo saaro AutoSketch. Microstation ayaa soo baxaysa oo waxay helaysaa dadka isticmaala 100,000.
AutoCAD iyo Microstation labadaba waxay ku jireen qaybaha multiplatform.
1987 AutoCAD Version 2.6
Xogta la hagaajiyay iyo 3D, tani waxay ahayd nuqulkii ugu dambeeyay ee ka shaqeeyay iyada oo aan lahayn wada-shaqeeye xisaab ah. AutoDesk waxay samaysaa isbahaysiga koowaad ee codsiyada tooska ah (SoftDesk).AutoCAD Release 9.0
Dad badan ayaa ugu yeeray AutoCAD 3, waji 3D. Badhanka, sanduuqyada wada sheekeysiga, bar moodada.
Tartanka: MinCAD iyo Architron (Mac)
CADVANCE waxay noqotaa barnaamijka koowaad ee CAD ee Windows. Microstation 2.0
Tani waa nooca ugu horeeya ee akhrisan karo oo wax ka beddeli kara qaabka dgn kaas oo ka koobnaa qaab version IGDS leh ballaarin Bentley Stystems.
AutoCAD waxay lahayd isticmaalayaasha 290,000 waxayna iibsadeen GenericCADD oo isticmaaley 850,000. Taasna waxa uu awood u yeeshay in uu bilaabo ololihiisa "Waxaan leenahay wax ka badan 1 million users" Microstation 3.0
1989 Sannadkan nambarka cusub ee istaandarka STEP wuxuu ka soo baxaa gacmaha Unigraphics, kaas oo udubdhexaad u ahaa inuu taageerayo mashaariicda furan ee furan.Sidoo kale sanadkaan, AceCAD wuxuu dhashay, software-ka koowaad ee CAD ee qaabeynta dhismaha. Sidoo kale T-Flex, oo mar dambe lagu magacaabo ACIS, barnaamijka koowaad ee lagu fahmo qaabeynta qorshaha casriga ah iyo nooca ugu horeeya ee Pro / ENGINEER yimaado.
Sannadkan waxa ka soo baxaya GraphiSoft, oo mar dambe taageeri doonta ArchiCAD.
MicroCADAM ayaa soo ifbaxday, kaas oo noqon doona barnaamijka ugu caamsan ee CAD ee Japan.
AutoDesk waxay iibisaa AutoSketch SoftDesk. Microstation Mac 3.5
Koobiga koowaad ee Microstation for Mac.
AutoCAD loogu talagalay PC iyo AutoCAD for Mac, Goobta waraaqaha iyo fikradda qaabka muuqaalka. Hagaajinta 3D ee ACIS, laakiin waa lacag dheeraad ah. Calaamadaha waxaa lagu soo bandhigaa, muuqaalka badhanka, had iyo jeer DOS.
AutoCAD way ku socon kartaa server.
Waqtigaan AutoDesk wuxuu isku dayayaa inuu galo dhexda animation ah oo leh AutoDesk Animator Studio.
Sannadkan, Intergraph waa shirkadda labaad ee ugu weyn ee barnaamijka CAD / CAM / CAE ee Maraykanka iyo kan labaad ee adduunka ugu weyn.
AutoDesk wuxuu ahaa hoggaamiyaha 500,000 nuqullada AutoCAD; 300,000 ee CADD Generic iyo 200,000 ee AutoSketch.
Laga bilaabo sannadkan iyo 8 kadib, AutoCAD waxay ku guulaysatay abaalmarinta barnaamijka CAD ugu fiican ee ay soo saartay "byte magazine". Microstation 3.5 ee UNIX
1991 AutoDesk waxay marka hore isku daydaa inay galaan jawiga dhismaha ee ArcCAD. Sidoo kale qorshaha ugu horreeya ee AutoCAD ee mashaariicda SUN Sannadkan Microsoft waxay soo saartay OpenGL, taas oo noqotay mid ka dhigan heerka xogta 3D.
Macluumaadka Mac, Canvas waxaa lagu caan baxay taageerada Apple's 7. Microstation V4 (4.0)
Microstation waxay hirgelisaa sifooyin badan oo kala gedisan: xayndaabyo, tixraacyo, tixraacyo la isku xoqdo, magacyada heerka, turjubaanka deymanka ah waxaa ku jira miliiriyada jaangooyooyinka, unugyada la wadaago, dusha sare iyo dusha sare. Nexus loo yaqaan 'Nexus' waxaa ku jira turjubaan dwg iyo awood u leh inuu ku ordo Windows 3.1.
Nooca koowaad ee luuqada CDM.
Bentley ayaa ku dhawaaqday in dadka isticmaala Microstation ay gaareen 100,00.
IV Qoondaynta Windows
Sanadahan 4 ee soo socda ayaa calaamad u ah kor u kaca ee Windows, AutoDesk waxay diirada saaraan kombiyuutarka waxayna ka baxaan Linux ee 1994.
AutoDesk waxay gasho suuqa suuqyada waxsoosaarka iyo dhismaha.
Microstation waxay gaarsiisaa dadka isticmaala 200,000 waxayna kala soocaan Intergraph. AutoCAD waxay gaarsiisaa malaayiinta 3 macaamiisha.
The tixraacyada dibadda,calaamadaha waa la kordhiyay, muuqaalka muuqaalka iyo kordhinta si loo xiro saldhigyada SQL. AutoDesk waxay bilowday 3D Studio 2 ee DOS ugu dambeeyey ee degaanka Mac.
Guud ahaan wuxuu soo saaraa Canvas for Windows.
DOS iyo Windows 3.1 versions, 3D ACIS Modeller oo isku dhafan. Tani waxay ahayd version ugu dambeeyay ee UNIX.
AutoDesk waxay soo iibisaa MicroEngineering Solutions oo ka mid ah AutoSurf.
Sannadkan waxaa aasaasay SolidWorks Inc.
Shirkadaha 16 waxay kor u qaadaan Nidaamka Woqooyiga ah (SVF) oo loogu talagalay qaab internet ah. Microstation V5 (5.0)
Microstation waxay isku xirnaysaa macaamiisha ku shaqeeya qaabka ikhtiyaariga ah, hababka khadka tooska ah, caqabadaha iyo xisaabinta xisaabinta ee centroid. Waxay u muuqatay run ahaantii Windows NT.
Tani waxay ahayd nuqulkii ugu dambeeyay oo Microstation ka muuqday astaanta iyo qalabka ay sameeyeen Intergraph.
Wixii Windows 95 iyo DOS, oo leh interface ah oo la mid ah barnaamijyada kale ee ku shaqeeya Windows. Autodesk waxay go'aansataa inaysan sii deyn fasaxyada Mac.
AutoDesk waxay bilowdaa habab si aad u hesho AutoArchitect iyo Softdesk oo ku socota koodhka AutoCAD.
AutoCAD waxay ku guuleeysataa malaayiin qof oo isticmaala software ahaan, waxaa ku xiga Cadkey oo leh 180,000 iyo Bentley 155,000.
Canvas waxay heshay abaalmarinta Win100 Windows Magazine. Bentley waxay isticmaaleen 155,000.
1995 AutoDesk, iyada oo loo marayo AutoSurf waxaa ka mid ah isbedelka heerka IGES. Waxa kale oo ka mid ah tusaalaynta parametric ee AutoDesk Designer.
Iibso Qaababka Automated, si aad u soo gasho adduunka GIS.AutoDesk ayaa ku dhawaaqday in haysta saddex milyan oo nuqul ah oo la iibiyay oo noqonaya shirkadda shanaad ee ugu weyn dunida.
Sannadkan waxa uu ka yimid Medusa, ee DOS iyo UNIX ee ComputerVision.
Pro / ENGENEER waa barnaamijka ugu horeeya ee CAD ah oo leh awoodda qaabaynta awoodda iyo xNUMXD oo la mid ah Windows NT iyo sanadkaan waxaa loo aqoonsan yahay lambarka 3 ee naqshada farsamada. Microstation 95 (5.5)
MicroStation bilawday version 5.5, shaqada ugu horeysay ee gelinno 32 in Zaman ee windows95, qalab AccuDraw (baddhamada), daaqadaha wada hadal, pop-AALADAHA,-muhiimka ah ee browser, ordaya files badan, SmartLines, views madax banaan ayaa lagu bilaabaa , guud ahaan animation (filimada).
Barnaamijka aasaasiga ah waxaa ka mid ah, taageerida ODBC iyo koobiga koowaad ee Microstation Modeler for Architecture iyadoo ku saleysan ACIS.
Bentley wuxuu ku dhawaaqay inuu haysto dadka isticmaala 200,000.
V Xuduudaha Qodobbada
Inta lagu jiro 3 sanadka AutoDesk iyo Bentley waxay doonayaan in ay sii wadaan mudnaanta koowaad ee xariiqyada toosan ee ka baxsan CAD-da fudud oo wata qaabka 32. AutoCAD waxay joojineysaa in lagu magacaabo barnaamijka CAD ee ugu fiican, waxay xajisaa xarumaha xasiloonida dhismaha, injineernimada iyo mishiinada.
Bentley wuxuu galayaa tartanka dhismaha iyo dhirta, 1997 wuxuu ka baxayaa Mac iyo UNIX.
AutoDesk oo soo bandhigaysa Desktop Desktop 1.1.
Canvas iyo TurboCAD waxay leeyihiin Mac iyo Windows.
Sannadkan waxay timaado DataCAD, FelixCAD waxay ku habboon tahay AutoCAD.
Pro / E wuxuu soo saaray qaabka VRML ee internetka.
Bentley wuxuu galaa dhexdhexaadinta Dhismaha Dhismaha iyo Warshadaha. Waxaa lagu qeexay lineka Geoengineering waxayna bilaabmaysaa markii ugu horeysay ee nidaamka Nidaamka Diiwaangelinta SELECT ee ka jiray 1990 sida CSP.
Wixii Windows NT iyo 95. AutoDesk waxay soo jeedineysaa qaabka DWF ee isticmaalka internetka.
Taariikhdaas 14 noocyo kala duwan ayaa la soo saaray, hal sanad kasta.
Qalabka DOS waa la waayaa.
GenericCAD ayaa la joojiyay, waxaana lagu soo jeediyay AutoCAD LT kaas oo ku kacaya $ 500 oo laga iibsan karo dukaanka kombiyuutarka oo dhan marka la buuxiyo oo kaliya macaamiisha AutoDesk.
DataCAD iyo MiniCAD, oo ah qiimaha oo buuxa $ 4,000. Pro / I kharashka 26,000 oo leh dhammaan noocyada 26 iyo UniGraphics 17,000 loogu talagalay modules 30.
Iyadoo iibsashada SoftDesk AutoDesk waxay bilaabmaysaa sii-deynta qaybaha tooska ah ee injineernimada.
Sannadkan, Hindisaha MarCom ee ah inuu demoqdo qaabka dwgku wuxuu bilaabmaa. Hindisku wuxuu ku dhamaanayaa markii Microsoft uu soo iibsado barnaamijka Visio oo ahaa muraayad ah AutoCAD.
Canvas waa software ugu isticmaalka loogu talagalay filimka filimka. Sannadkan waxay ku dhammaaneysaa qayb ka mid ah shirkadda bilaabay SolidWorks. Microstation SE (5.7)
Microstation waxay soo saartaa nambarkeeda 5.7 oo loo yaqaan 'Special Edition', oo leh astaanta midabka iyo adeegga xayeysiiska Office2007, kala xulashada awoodda, xiriirinta xiriirka, xidhiidhada OLE iyo hawlaha qaar ka shaqeyso internetka.
Bentley wuxuu bilaabay inuu la shaqeeyo Model Model. Daratech waxay ku taxan tahay shirkadaha ugu kobcaya kobcinta CAD / CAM / CAE version ugu dambeeyay oo la mid ah Mac iyo Linux.
1998 Sanadkan OpenDWG Alliance wuxuu ku dhashay bakhaarro ay ka tagaan MarComp.
Sannadkan ayaa timid koobkii ugu horreeyay ee IntelliCAD, laga bilaabo dadaalka Visio.
VI Xaddiga 64 ayaa imanaya
Sanadahan 9 ee soo socda, AutoDesk iyo Bentley waxay sii wadaan kordhinta adeegyadooda khaaska ah waxayna hagaajiyaan shaqadooda iyagoo adeegsanaya iibsiyada tiknoolajiyada cusub. AutoDesk wuxuu bilaabmaa inuu sii wado qaabka dwg in ka badan hal sano, qaar ka mid ah shuraakooyinkooda sida Eagle Point ayaa ka sarreeyey suuqa AEC. Microstation waxay soo saartaa V8 waxana ay raadineysaa in ay soo jiitaan dadka isticmaala alaabta iyagoo akhrinaya qaabka aan loo badalin.
Wixii Windows 95, NT, 2000. Sawirada waraaqaha ayaa noqonaya mid aad u dardargelinaya hirgelinta Meelo badan, iyo hagaajinta waxsoosaarka leh isticmaalka badhanka midig, oo eegaya in la yareeyo keyboard.
Nidaamka dwg 2000 wuxuu ku jiraa markii ugu horeysay muddo sannad ah, intii lagu jiray AutoCAD 2000i iyo AutoCAD 2002.AutoCAD 200LT, oo aan lahayn 3D ama Autolisp.
Xayeysiiska muraayadda-dhajinta ee tartanka ka soo jeeda GuicicCADD ayaa hore u iibsatay AutoDesk. Microstation J (7.0)
Java waxaa lagu darayaa luuqada horumarka, waxaa loo yaqaan 'JMDL', oo laga reebo version 8, taageerada QuickvisionGL. The qaabeyn adag. Liisanka xagjirka ah ee ka imanaya Server Model.
Jeeg sax ah, Taageerada Windows 2000. Waxay soo bandhigaysaa ProjectBank oo mar dambe noqon doonta Wicitaanka Project.
Noocaan faylasha loo yaqaan Dgn V7 ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee ku saleysan IDGS, V8 wuxuu ku saleysnaa IEEE-754.
Sanadkan Magacyada Upside Magazine ee Magaca Bentley oo ku yaala 1998 100 shirkadaha kulul. Bentley wuxuu ku dhawaaqay inuu haysto 300,000 iyo 200,000 ee SELECT.
AutoDesk wuxuu isku xiraa shaqeynta internetka. Marka ugu horeysa waxaad ku iibsan kartaa AutoCAD online adiga oo sicir-dhimis ah ilaa 15% qiimaha dukaanka.
Sanadkaas oo ah AutoCAD 2000i LT waxay soo baxday inay la tartanto IntelliCAD.
Eagle Point wuxuu ahaa hogaamiye AEC. Alibre waxa uu galaa xoog badan oo wada shaqeyn ah. Graphisoft waxay qaadataa DrawBase. TurboCAD waxay gaadho hal milyan oo qof.
Jiid jooji iyo hoos u dhig, ka badbaadi kooxo lakab. Hawlaha caawinta ee internetku waa isku dhafan yihiin
AutoCAD 2002i ($ 135) si ay ula tartanto IntelliCAD. Microstation V8 (8.0)
Habka cusub ee V8 waxaa loo soo bandhigaa iyadoo loo eegayo 64, akhris iyo dib u habeyn dwg / dxf dabiiciga ah, taariikhda taariikhda, ciribtirka. Xannibaadyada waxaa laga saaraa heerarka (lakabyada), dib udhaca iyo cabbirka faylka.
Marka ugu horeysa maareynta qaabeynta marka la soo bandhigayo qaababka xaashida. Taageerida MrSID.
Barnaamijka VBA wuxuu isku xiraa oo wuxuu la qabsadaa wadashaqeyn la leh .NET.
Horumarin kale ayaa laga qaadayaa qaabka V8, sida qaabaynta qaybaha shaqada, miisaan run ah.
2002 Sanadkan AutoDesk ayaa iibsanaya shirkado hormariyey teknooloojiyada Revit iyo Inventor ee Isdhaafsiga BIM.
Qalabyada dheeraadka ah ayaa isku dhafan (horeyna waxay ku jireen Softdesk), miiska hantida ayaa la hagaajiyay iyada oo la dhexgalo saaxiibtinimo.
Nooca AutoCAD 2004 DWG wuxuu ku sii jirey AutoCAD 2005 iyo AutoCAD 2006.
Laga bilaabo sanadkan, AutoDesk waxay soo saari doontaa dhammaan jaraa'idada cusub ee AutoCAD bilaha bisha Maarso. Microstation V8.1
Sanadkan Isbahaysiga OpenDWG wuxuu isbeddelayaa Iskaashiga Furan ee Furan iyo wuxuu heshiis la geli doonaa Bentley si uu u taageero OpenDGN una dheeraado tarjumaada fudud ee faylasha CAD.
CADstantard u muuqda, dooggu wuu ka yaraadaa. Amarro badan ayaa ka gudbaya khadka taleefanka ilaa daaqadaha waxayna sii wanaajiyaan hagaajinta mawduucyada. Microstation V8 2004 Edition (8.5)
taageero qaabab cusub billabo 2004-2006, CADstandard waa la cusboonaysiiyaa iyo fulisaa badan-baddhamada iyo abuurista files PDF iyo 2D 3. XFM waxaa soo bandhigay sida sifooyinka model-ku salaysan, oo intaasu waxay ahayd version ee la soo dhaafay in adkaystay MicroStation ka Bentley Map XM yeedhay version ku salaysan XFM.En bilaabo interoperability la ADT U3D oo markii danbe loo ogol yahay in ay ku shaqeeyaan AutoDesk Adobe
Bentley waxay iibsatay Haestad Methods waxayna bedeshaa dhammaan nidaamyada biyaha ee V8 cusub.
Qodobbada iyo jadwallada muuqda. Wuxuu hagaajiyaa maaraynta maskaxda iyo maareynta lakabka iyada oo aan daaqada furan. Maaraynta hannaanka hantida ayaa la hagaajiyay, DWF waxay taageertaa dib u habeyn.
AutoDesk waxay iibsataa Maya iyo Sketchbook.
Waxay wajahaysaa waji cusub 3D muuqaal ahaan, taas oo ka tarjumeysa inay hagaajiso textures, soo bandhigida, bandhig muuqaalka ah iyo qaar ka mid ah interface.
Naqshadda 3D way ka joogtaa inay ka soo baxdo sheyga asaasiga ah iyo fikradda ah Noocyada 3DNooca 2007 DWG wuxuu ku sii jirey AutoCAD 2008 iyo AutoCAD 2009. Microstation V8 XM Edition (8.9)
Waxaa lagu horumariyaa kaabayaasha NET. Integra tixraacyo dibadda ah PDF, taageeraan daahfurnaanta, qaab-dhismeedyada, Maaraynta midabka Pantone iyo Ralalka.
Wuxuu isku xiraa hawlaha socdaalka.
XM waxaa loo sii daayay horumarinta joogtada ah, iyagoo rajeynaya in ay dib u dhisto waxa V8 horey u samaysay faa'iidooyinka ay ku leeyihiin bedelka hoose ee muuqaalka ku saleysan Direct-X. Taageerada Windows Vista iyo taageerida DWG 2007-2008.
Nooca ugu horeeya ee AutoCAD oo la mid ah 64.
Iskudhin la hagaajiyey barnaamijyada kale "maya cad", casriyeyn weyn oo ku saabsan sawir qaadidda iyo daabacaadda. Bentley wuxuu iibsadaa RAM iyo STAAD si uu u bedelo qaabka qaabeynta qaab dhismeedka loogu talagalay bilaabista V8i.
VII Jiilalka dhowaan
Sannadihii ugu danbeeyay ee 4 waxay muujiyeen natiijooyinka heshiis wadajir ah ee AutoDesk la leh Bentley ee xarumaha Dhismaha Architecture, Engineering, iyo Animation. Labadaba waxay raadinayaan in ay qiyaasaan rabitaankooda leh taageerada geospatial iyo qaabaynta BIM. Bentley oo ku salaysan XFM, oo kaliya oo lagu qurxinayo Dhirta Warshadaha, AutoDesk oo leh qalab firfircoon iyo dhiirigelinta wax soo saarka iyo xayeysiinta filimka.
Dib u habeyn dhexdhexaadinta iyadoo la hirgelinayo Ribbon.
Marka ugu horaysa AutoCAD waxay soo saari kartaa faylka dgn, laakiin aan waxba ka beddelin.
Waxay ku dareysaa qaababka isdhexgalka ee xogta sida ViewCube iyo Diiwaanka Tallaabada.
Sanadkan AutoDesk waxaa lagu magacaabaa lambarka 25 ee ka mid ah shirkadaha ugu caansan 50 ee adduunka.
AutoDesk waxay iibisaa SoftImage. Microstation V8i (8.11)
qalabka design 3D, views firfircoon, taageero caalami ah isku xirka nidaamka (wax yar ka hor Geographics), taageero billabo 2009 .Soporte RealDWG, interoperability la qaabab GIS kaliya taageeray Bentley Map (SHP, MIF, bartamihii, tab). Taageero lagu dhexgalo pdf iyo shp reference (horay loo arkay raajo). Awood u leh in ay daabacaan macluumaadka I-modelada.
Wuxuu isku xiraa awoodda isdhexgalka GPS.
Aragtida caddaaladda iyo isku-duwidda wax-qabadka waxay isku dhafan yihiin aragtida.
Sannadkan Bentley iyo AutoDesk waxay saxiixaan heshiiska si laysugu beddelo laybareeriyada dgn iyo dwgyada oo leh wada shaqeeyn ballaaran.
2010 DWG format ayaa ku sii jirey AutoCAD 2011 iyo AutoCAD 2012.
Waxay soo bandhigaysaa naqshadaynta qaab-dhismeedka, mesh-ka 3D, taageerida Windows 7 ee 32 iyo 64.
Taageero si aad u dhoofiso PDF oo ku wac iyada oo la tixraacayo aqoonsiga lakabka.
Sannadkan AutoDesk wuxuu soo iibsadaa shirkadda hal-abuurka ah ee aan hadda ku magacownay AutoCAD WS si ay ugu dhex gasho telefoonnada gacanta. Microstation V8i Xulo 1 Taageerida daruuraha dhibcaha. DWG 2010 iyo FBX.
Hagaajinta waxaa lagu daraa isdhexgalka qaabab kale, taageero Daabacaadda 3D.
Bentley iibsatay gINT si loo abuuro line of geotecnia.En sanadkan Bentley waxaa ku jira shirkadaha 500 leh ugu firfircoon ee kaabayaasha caalamka oo dhan.
Transparency ee sheyga, qaabaynta iyo falanqeynta dusha sare.
Qarsoodi / shay walxaha, hawlgal la leh shay la mid ah, taageero daruuradaha dhibcaha.AutoCAD 2011 ee Mac
AutoCAD waxay ku noqotaa Mac ka dib markii ay ku dhacday 1994. Microstation V8i Xulo 2
Bentley wuxuu billaabmayaa soo bandhigida I-model sida soo jeedinta ah in la cabiro BIM qaabka dgn.
The daruur dariiqa.
La Alliance Design Alliance Waxay bilaabi doontaa Teigha SDK oo ka badan xubnaha 1000 ee dalalka 40. Kuwaas waxaa ka mid ah Adobe, BricSys, Carlson, ESRI, GraphiSoft, IntelliCAD, Intergraph, Wicworks, Oracle, Software Safe, SolidWorks,
Kalsooni weyn ayaa loo soo bandhigaa walxaha ku jira arrimo iyo kooxo. Dukumentiyada naqshadda, nadiifinta nuqulada.
Liiska dib loo habeeyay oo la socda raadinta soo jeedin. Bentley waxay ku talo jirtaa inay bilawdo horumarin cusub oo ka mid ah bartamaha-2011, kaas oo I-loojoogaa ay ku sii socdaan xayeysiisyo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha ay ka midka yihiin iyo dibadda ee xarumaha Architecture iyo Engineering of AutoDesk.
Jaantuskan ayaa la hagaajiyay ka dib boostada Shaan Hurly ku dhowaad 26 koobayaa Dhacdooyin ee taariikhda AutoCAD, istaag tallaabooyinka sida weyn sida: shaqada kombiyuutarada shakhsi Sugi, iibsashada dadka isticmaala GenericCAD si ay u gaaraan mid ka mid million, kartida si caalami ah faafin oo aan ursan si ay u bartaan farsamooyinka iman kara. Had iyo jeer hoggaanka u qabatay in kastoo alaabta si buuxda ma isku dhafan, laakiin hal sida Maya, WS oo gashay gudaha Mac dunida.
Shaxda kale qeexayaa Dhacdooyin 13 Bentley aqoonsan gudahood wareegga ah oo ay ku jiraan inta u dhaxaysa dalka durkiya 14 iyo 18 kor lagu sharaxay. Waxaa ka mid ah tallaabooyinka ay tahay u istaagaan soo baxay go'aanno wanaagsan, waa isticmaalka qaabab kaliya 3 mustaqbalkiisa ciyaareed oo dhan (inkasta oo ay tani u muuqataa in Ree isticmaalaya 64 gelinno inay V8), awoodda edit hooyo billabo / format DXF iyo ismariyaan in jaangooyo dhan khadadka ay qaabab in la falgala ka mid ah Bentley. Waxaa dambaysaa soo caan inkastoo envididables hawleed ee macaamiisha ee heerka sare ah tallaabooyinka meditation dhaafsiisantahay, gaar ahaan isbadalka qaabab deggan mudada dheer.
Sida muuqata, caqabad ku ah labada sanno ee soo socda shirkadaha, kuwaas oo aan la tartamaya suuqa, labadaba waxay leeyihiin meel cad oo jira tusaalooyin istaahila in ganacsi ku salaysan fursado. Iyadoo isbeddellada iyo wixii adduunka ee suuqyada technology, caqabadaha jira si aan u gaaro hal-abuurnimo si ay ula falgalaan wax soo saarka shisheeye hoos hab BIM ee a gilgilay by Galitaanka deegaanka qalabka, ku tiirsanaanta internetka, ku celiska aheyd ee farsamooyinka soo baxaya sida Apple iyo buuq keenaya suuqyada kala duwan iyo OpenSource.
Post Previous«Previous Blogsy, oo loogu talagalay blogyada laga helo IPad
Post Next Woopra, si loo kormeero martida waqtiga dhabta ahNext »
3 Jawaab "Geofumadas: Sanadka 30 ee AutoCAD iyo Microstation"
Luis Morales isagu wuxuu leeyahay:
Macluumaadka wanaagsan, horay u soco, marwalba waan daawanaynaa ..